QM oo tababar siisay Wariyeyaal Soomaali ah | KEYDMEDIA ONLINE
Saxafiyiin ka howl gala magaalada Kismaayo ee xarunta Kumeel Gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa tababar kor loogu qaadayo wacyi galinta xorriyadda hadalka looga furay magaalada Kismaayo.
KISMAAYO - Soomaaliya: Iyadoo ay nagu soo wajahanyihiin doorashooyinka Soomaaliya, ayaa toban weriye oo ku sugan magaalada kismaayo waxa loogu qabtay halkaasi tababar sare loogu qaadayo Wacyigalinta Xorriyadda Hadalka, waxaana tababarkaas soo agaasimay islamarkaana uqabanayay wariyayaasha xariiska qaramad midoobey u qaabilsan soomaaliya. Tababarkan loo qabanayo tababarkan wariye oo afar maalin ka socon doona magaalada Kismaayo ayaa si rasmi ah uga furmay Hoolka shirarka ee Maamuus.
Tababarkan waxaa si toosa u bixinaya shaqaalaha xuquuqul Insaanka u qaabilsan xafiiska UNSOM, waxa uuna diiradda saarayaa mabaadi'da caalamiga ah ee ku aaddan xorriyadda hadalka, iyo sidoo kale heerarka xuquuqda aadanaha ee gobolka oo dhan. Ujeeddada tababarkan ayaa lagu sheegay in ay helaan suxufiyiinta aqoon ballaaran oo ku saabsan arrimaha xuquuqda aadanaha iyo aasaaskooda sharciyeed, oo ay ku dabbaqi karaan shaqadooda maalinlaha ah marka ay ka hadlayaan arrimaha Soomaalida.
Guud ahaan waddanka soomaaliyo kama jirto xorriyad hadal, waxaana mar walba la xiraa wariyaha, iyadoo aan hab sharci loo marin ayaa la iska xirtaa wariyayaasha ka howl gala warbaahinta madaxa bannaan ee dalka oo dhan, toddobaad kahor ayaa dib loo sii daayay wariye ka howl gala warbaahinta Kulmiye kaasoo loo soo xiray wareysi uu la yeeshay Ganacsade soomaaliyeed oo aad caan uga ah dhulka soomaaliya.